HDPE Hydraulic Butt Fusion Welding Machine Ngwọta Nsogbu | Lechuang
Ọdịda igwe ịgbado ọkụ butt hydraulic butt na -agụnyekarị ihe ndị a na azịza ndị metụtara ya:
Mperi 1. Mgbe ịtinyechara, moto nke ọdụ ụgbọ mmiri ahụ na -agbagharị ma nụ ụda na -ada ụda, mana mkpanaka mgbanaka hydraulic agaghị agagharị; Ngwọta: buru ụzọ lelee ma mmanụ hydraulic dị n'ọdụ ụgbọ mmiri dị, ma ọ bụrụ na ezughị, biko tinye Mba hydraulic mmanụ 46; Lelee ma njikọ dị n'etiti ọdụ ụgbọ mmiri na etiti ahụ ejikọtara nke ọma; na njedebe, lelee ma ihe mmetụta hydraulic mebiri
Mmejọ 2. Enweghi ike igosipụta voltmeter nke igbe akara na ọdụ ụgbọ mmiri; Ngwọta: lelee ma ngwaọrụ wiring dị n'azụ igbe nchịkwa nke ọdụ ụgbọ mmiri ahụ akwụghị ọtọ, ọ bụrụ na enweghị nsogbu, lelee ma voltmeter ahụ mebiri emebi
Mperi 3. Efere ọkụ anaghị ekpo ọkụ ma ọ bụ enweghị ike ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ mgbe ịtinyechara ya; Ngwọta: N'ozuzu, enweghị ike ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ enweghị okpomọkụ. Lelee ma njikwa okpomọkụ dị na efere kpo oku emebila. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka nke a, ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri E nwere nsogbu na temomụ ọkụ na
Mmebi 4. Mgbapụta mmanụ na-adị na ntanetị nke ọkpọ ọkpọ mmanụ dị elu; ngwọta: dochie ọkpọ ọkpọ mmanụ dị elu ma ọ bụ nkwonkwo ọla kọpa
Mperi 5. Ụgbọ ala hydraulic anaghị arụ ọrụ mgbe ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ; ihe ngwọta: a na -atụ aro ịlaghachi na ụlọ nrụzi iji rụkwaa moto, n'ihi na enwere ọtụtụ ihe dị n'ime moto ahụ, ekwesịrị inyocha ihe kpatara ya nke ọma.
Nsogbu 6. Onye na -egbutu ihe na -akwọ mmiri anaghị atụgharị; Ngwọta: lee ma mgbachi akwa akwa hydraulic siri oke ike, ma ọ bụ ọkụ igwe ihe ọkụ ọkụ agbaala, ọ bụrụ otu a, biko laghachi n'ụlọ ọrụ maka nrụzi